ရန်ကုန် ၊ ဧပြီ ၁၄
အသွားအလာကန့်သတ်ကာ သတ်မှတ်နေရာများ၌ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခံရသူများ (Quaratine အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နေသူများ) အနေဖြင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်၍ အား‌ပေးမှုနှင့် အကြံဉာဏ်များ ရယူရန် ဆန္ဒရှိ လိုလားပါက ကျွမ်းကျင်‌‌သော အတိုင်ပင်ခံများထံ ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးရုံး (OCHA) က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အခမဲ့ခေါ်ဆိုနိုင်သော ဖုန်းနံပါတ်များကို ပူးတွဲဖော်ပြထားပြီး ဆက်သွယ်လိုသူများအနေဖြင့် နံနက် ၉ နာရီခွဲမှ ညနေ ၄ နာရီခွဲအတွင်း ဆက်သွယ်နိုင်ကြမည်ဟု ဖော်ပြသည်။ (ပုံ ပူးတွဲ ဖော်ပြထားသည်။ ပုံ – ၁ )
အလားတူ ဖော်ပြပါအတိုင်း စိတ်ဓာတ်ရေးရာ မြှင့်တင်ပေးမှုဆိုင်ရာ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု ရယူနိုင်ရေး လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် (၁၄) ရက်တာ အသွားအလာ ကန့်သတ်ခြင်း (သို့) တားမြစ်ခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် သီးခြားခွဲခြား နေထိုင်ရခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော အကြောင်းများကြောင့် Quarantine အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်နေသူများ အနေဖြင့် စိတ်ဖိစီးမှုများ ခံစားရနိုင်သဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနက စိတ်ဓာတ်ရေးရာမြှင့်တင်ပေးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း အသိပေးထားသည်။ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှု ခံယူလိုသူများအနေဖြင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း ဌာနက ဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိသည်။ (ပုံ ပူးတွဲ ဖော်ပြထားသည်။ ပုံ – ၂ )
ယင်း အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုကို နေပြည်တော် ကောင်စီ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအပါအဝင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများရှိ အထူး လေ့ကျင့်ပေးထားသော လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများက နေ့စဉ် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဤအစီအစဉ်ကို ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှု ဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာများဖြစ်ကြသော MPT, Mytel, Telenorနှင့် Ooredoo တို့က COVID-19 ကူးစက်ကပ်ရောဂါဘေး ရင်ဆိုင်နေရစဉ်ကာလအတွင်း အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးကြမည်ဆို၏။
နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုခံယူသူများ၏ သတင်းအချက်အလက် မပေါက်ကြားရေးကို အထူး အလေးထား ကာကွယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အခြားလူမှုရေးနည်းလမ်းဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရန် လိုအပ်ပါက ဆက်လက် ညွှန်းပို့ ချိတ်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။
Photo Credit : 1 . United Nations OCHA Myanmar
Photo Credit :2. Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement Myanmar
ယခင်ဆောင်းပါးCovid-19 ရဲ့ ထူးခြားသော ရောဂါလက္ခဏာများ (သို့) ဗိုက်နာခြင်းဟာလည်း Covid-19 ရဲ့လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးဘားအံမြို့နေ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိ အိမ်ထောင်စုများအတွက် ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် စားသောက်ကုန်များ လိုက်လံ ဖြန့်ဝေ